China iibheringi mqengqeleki abenzi kunye nabathengisi | Xinri
Iibheringi mqengqeleki enalitini iibheringi kunye izileyi ezijikelezayo ezincinane enobubanzi xa kuthelekiswa ubude babo. Iphrofayili eguqulweyo / iprofayili yendlela eya kuthintela iincopho zoxinzelelo ukwandisa ubomi benkonzo.
I-XRL ibonelela ngeebheringi zentsimbi yenaliti kuyilo olwahlukeneyo, uthotho kunye noluhlu olubanzi lobungakanani, obenza zilungele iimeko ezahlukeneyo zokusebenza kunye nokusetyenziswa.
1. Inaliti yokuthwala inaliti icekeceke kubume bayo, incinci ngobukhulu kwaye iphezulu ngokujikeleza ngokuchanekileyo, kwaye inokuthwala umthwalo othile we-axial ngelixa ithwele umthwalo ophezulu ohamba phambili. Kwaye ubume bemveliso bohlukile, ubhetyebhetye ngokubanzi, kulula ukuyifaka.
2. Umdibaniso wenaliti edibeneyo ubunjwe yiroli yenaliti ye-centriole kunye nebhola epheleleyo, okanye ibhola yokufaka, okanye i-roller cylindrical roller, okanye ibhola yoqhakamshelwano lwe-angular. Inokuyilwa ngokweemfuno ezizodwa zesakhiwo sabasebenzisi.
3. Ukudibanisa inaliti yokuhambisa inaliti kusetyenziswa kumjikelo wendlela wokuthwala apho i-shaft efanayo iyilelwe khona, eneemfuno ezithile kubulukhuni bokuthwala.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zomatshini, oomatshini bokunyibilikisa isinyithi, oomatshini bempahla elungiselelwe oko kunye noomatshini bokushicilela kunye nezinye izixhobo zoomatshini, kwaye zingenza ukuba inkqubo yoomatshini iyile ngakumbi kwaye icekeceke.
Egqithileyo Yolula Ball iibheringi
Okulandelayo: Ukunikela mqengqeleki cylindrical
izinto zobhedu izinto inaliti mqengqeleki
mveliso unikezelo iibheringi mqengqeleki inaliti
Jemani intshi ubukhulu inaliti mqengqeleki ethwele
I-intshi etyiweyo indebe yenaliti yokuthwala
inaliti mqengqeleki ukuzala
Inaliti mqengqeleki iibheringi steel ebuhlanti